Umshado Wesintu – The Ulwazi Programme
Kuqala yayithwalwa intombi meyingathwalwanga bekuba omunye kubazalibayo ngokuhalela izinkomozalomnumzane nokuthanda umfana ngokuthi uyayishaya induku noma ulwa kakhulu mekunempi, noma omama bezixoxela bodwa ngingajabula intombi izogana lapha kwami usezoyishoke ukuthi ubonani kuyo usezoshoke ikhuthele ilinono mhlambe ukayibone ithwele umyaba omkhulu beyiphuma kotheza mhlawumbe ukayina ke ukuthi njalo iyasinda kubo iwakowasha ithi ingaqeda ibuyele kubo iyokwenza omunye … Read more
Categories Culture Tags Imicimbi yesintu, Traditional Ceremonies, Traditional Wedding, Umshado Wesintu
Ukwabiwa Kwefa Ngendlela Efanele Ukwabiwa kwefa kuyinto ebalulekile emndenini noma imuphi. Ifa yilapho kusuke kuhlukaniswa ngokulingana noma ngokushiwo umnikazi womuzi izimpahla zasekhaya njengemfuyo njalonjalo. Kwakubalulekile ukuthi umnumzane uma enemfuyo ukuthi ayabe esaphila ukuthi izosala nobani ekhaya ukuze kungabi nezingxabano nemibango. Okubalulekile ukuthi ezikhathini eziningi ikakhulukazi ezakudala kwakubalulekile ukuthi umndeni uthole ingane noma izingane zabafana. Kwakunenkolelo … Read more
Ngokwesiko lamaZulu intombazane uma isiganile noma ilotsholiwe, ihambisa umbondo kubo kamkhwenyana. Umbondo ukudla okunhlobonhlobo okuthwalwa amantombazane aphelezela umakoti uma eya emzini noma lapho eganele khona. Intombazane uma kade izocelwa iyaye ihambise umbondo obizwa ngokuthi ingqiba zinyawo zabakhongi, ngokwesiko uma kade kufike abakhongi bezocela isihlobo esihle intombazane leyo ekuziwe ngayo ibizwa ngomakoti ngoba isiganile. Umakoti uphathisa … Read more
Umuntu wesilisa ngasosonke isikhathi uyinhloko lokho ubekusebenzela ngokuthi athi ekhula asebenze kanzima asheshe abe nonkosikazi nomuzi nengane. Ubuhlonishwake endaweni ubungavunyelwa ukuthi uphawule mekunemihlangano ngoba awunaye unkosikazi, futhiubungavunyelwa ukuqobela abanumzane inyama. Ngokuthi babefuye kakhulu babengenandaba ukuthi balobole kangaki yingakho babeba nesithembu bekwazi futhi ukubondla mase bebazekile labobafazi. Ukuba nesithembu bebekuthanda ngoba bebeba nengane eziningi, kakhulu ezabafana … Read more
Categories Culture Tags Traditional Wedding, Umshado Wesintu
Categories News Tags Umshado Wesintu